Best nostalgic Turntables 2017 - Asịwo ji ndu - China 10TURNTABLES
Eriri mbanye Turntables
Portable akpa akwa Turntables
> Best nostalgic Turntables 2017 - Asịwo ji ndu
Best nostalgic Turntables 2017 - Asịwo ji ndu
Nostalgic Turntables nkọwapụta Comparison
Brand Name Turntable ọsọ n'efere dị mbadamba Ihe ọkpụkpọ CD AM / FM redio mkpọchi
Electrohome Wellington Record Player (EANOS502) Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Electrohome Akara Mbinye aka Vinyl Record Player Omuma Turntable (EANOS700) Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Vicrola nostalgic Classic Wood 6 na-na-1 Bluetooth Turntable Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Crosley CR704C-PA Abù Turntable Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Vicrola nostalgic Aviator Wood 7-in-1 Bluetooth Turntable Entertainment Center, mahogani Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Grace Digital GDI-TW3USB 7-in-1 baraaka Entertainment Center, paprika Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
JPyle PTCD54UB Bluetooth Vintage Omuma Style Turntable Ọkà Okwu System Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Sylvania SRCD838 nostalgic Turntable Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Pyle Vintage Vinyl Turntable baraaka System (PTCD64UBT)	 Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Pyle Vintage Vinyl Turntable baraaka System (PTCD64UBT) Arụ 3 ọsọ plastic √ √ Check Price
Nso nso Review maka Turntable
Best-echebe Mmadụ Drive Turntables 2017-Asịwo ji ndu
Best Hi-Fi Turntables 2017 - Asịwo ji ndu
Best Portable akpa akwa Turntables 2017-Asịwo ji ndu
Construction ihe: MDF (ajụ njupụta fiberboard)
Auto Laghachi: Ee
Record gbapụrụ ọsọ: 33, 45, 78
Ọkà Okwu Size: 2x 5W (3 ") 8 Ohms
Frequency iche (AM): 530-1710 kHz
Frequency iche (FM): 88-108 MHz
Power Oriri: 19 watts
Size (W x D x H): 19,29 "x 12.6" x 9,1 "
The Electrohome Wellington Record Player bụ ezigbo 4 na 1 ochie turntable na-enye gị na-ege ntị gị niile oge ọkacha mmasị. Ya furbished na mahogany osisi na analọg audio na sistemụ na-na-inpired site karịrị 100 afọ nke development. Nke a ndekọ player mejupụtara ọtụtụ ụdịdị dị ka AM / FM redio, CD si na N'ezie a vinyl player. All ndị a ụdịdị na-achịkwa a illuminated n'iji ya gee ntị Ịkpọ oku. N'ezie, ị na-enwe ike ijikọ ekwentị gị na play music mgbe vinyls na-anọghị; ugbu a bụ na dị nnọọ ịtụnanya?
Ebe ọ bụ na ihe ndekọ player na-nchọ na mahogany osisi ya enriches ụda àgwà na-enye gị ezigbo ụda arụmọrụ i nwere ike inwe. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ onwe ige ntị, na e nwere a n'ọdụ ụgbọ mmiri nke na-enye ohere ka ị na-ikwunye na gị ekweisi. Otú ọ dị ya bụghị naanị osisi na-arụ a nnukwu ọrụ ma agịga eji dị ka nke ọma, ọ bụ a sapphire tipped seramiiki agịga na-enhances audio àgwà a ọzọ na-ekpo ọkụ na eke vibe.
Onye nke kasị mma akụkụ nke ihe ndekọ a player bụ eziokwu na i nwere ike dee gị nnọọ onwe vinyls na ekwentị gị site na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na player onwe ya. Ọ dịghị kọmputa mkpa, dị nnọọ ikwunye na gị USB na ndekọ. Ọ bụ nnọọ mfe na onye ọrụ enyi na enyi. Ọnụ na naanị $ 149,99, ọ bụ maa a na-ezu ohi. N'ozuzu na Wellington Record player bụ pụrụ iche.
1 afọ akwụkwọ ikike.
Ike idekọ ihe album si USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enweghị ejikọta a na kọmputa.
Mgbe ọ bụla a ọhụrụ vinyl na-egwuri, ụfọdụ skips nwere ike nụrụ.
02 • Electrohome Akara Mbinye aka Vinyl Record Player Omuma Turntable (EANOS700)
Imecha: Real Wood mkpuchi
Record Player: Ee
Idekọ Auto Laghachi Ogwe aka: Ee
USB n'ụdị: Ee
USB na ndekọ: Ee
3.5mm Inyeaka Input: Ee
Ọkà Okwu Size: 2x 5W 8 Ohms (2.6 ") 2x15W 8 Ohms (3.6")
Power nkwụnye Input: 120V - 60 Hz
Power nkwụnye mmepụta: 11V 1,100mA
Power Oriri: 50 Watts
Achọ a classic style turntable na a nta aka nke oge a technology? Lee ọ gara n'ihu dị ka nke a bụ ihe nlereanya ka unu. Nke a turntable na-mere nke eke osisi na bụ a Hi-Fi stereo usoro na AM / FM, CD, USB na MP3. Vinyl-to-MP3 na ndekọ na aux input maka smartphones na mbadamba, a n'ezie bụ ihe nile rounder turntable.
Electrohome bụ a ụlọ ọrụ na e-eme audio ngwaahịa ihe karịrị 100 afọ. Ha na-guzobere na Ontario na na ozugbo maara dị ka "eze nke Radio". N'ihi na price nke $ 199,95, ọ wuru na-Bluetooth maka wireless music gụgharia na ya arụ ọrụ niile nke ọkacha mmasị gị Bluetooth ngwaọrụ (smartphones, mbadamba, Laptọọpụ, kọmputa, wdg). The Vinyl ka MP3 ndekọ-enye gị ohere na-atụgharị gị vinyl ndekọ n'ime digital ọdịyo faịlụ site na headphone jaak ọsọ ọsọ. Ọ nwere ọsịsọ ngosi maka AM / FM redio dị ka nke ọma na na nso stereo okwu. All atụmatụ na ị chọrọ na-juru n'ọnụ n'ime nke a nlereanya.
Na nnọọ sleek Devid agụghị ndị gbara imewe, ọ maa na-echetara gị gị yesteryears. Enye anya a nostalgic vibe, ị ga na-eche na ị na-azụ ke 60s. Gịnị na-agaghi ahu n'anya banyere nke a turntable? Onye kwesịrị kpọrọ tụlee-a turntable ma ọ bụrụ na gị ego bụ n'ime $ 100- $ 200.
Records music mfe.
Adabara niile vinyls.
Speed ​​anaghị adịru ogologo.
03 • Vicrola nostalgic Classic Wood 6 na-na-1 Bluetooth Turntable
Ọrụ: CD Player, Kaseti Player, wuru na-okwu
Mmepụta Type: Ọkà Okwu
Na-agụnye: AC Power nkwụnye
x 18 sentimita W
Arọ: 14,9 pound
Akwụkwọ ikike Description: 1 Year Limited Manufacturer akwụkwọ ikike
Batrị: dịghị batrị eji
Ọ dịtụla mgbe i na-achọ inwe a n'ezie ochie Devid agụghị ndị gbara na-achọ turntable ọkpụkpọ ka vibe elu ụlọ gị? Ọfọn nlereanya a nwere ya niile. Amazing nostalgic Devid agụghị ndị gbara anya na a mma ọcha ụda. A nlereanya site Innovative Technology, a atọ na-agba turntable (33 1/3, 45, 78 RPM) arụ niile nke ọkacha mmasị gị vinyl ndekọ na albums.
Ọnụ na naanị $ 79,99, nke a na-ezi uche dị ọnụ, ya abịa na-ewu na-Bluetooth na-egwu gị music gị Bluetooth nyeere ngwaọrụ eriri; dịghị udọ mkpa. All gị mma, nke a bụ a n'ezie ezi turntable. Ọ na-nwere wuru na-CD Player, Kaseti Player na FM Radio. A USB a gụnyere maka 3.5mm aux na Jack maka ihe ọ bụla na-abụghị ngwaọrụ Bluetooth. Gịnị ọzọ nwere ike ị ga-arịọ? Ọ na-nwere ihe RCA aux-na headphone jaak.
The n'ire isi n'ihi na ihe nlereanya a bụ na ya Bluetooth ike bụ ịtụnanya na ya price. Ntekwasa na aja aja, ọ ga-abụ a zuru okè Deco gị ndụ ulo ya na ịbụ a mma turntable. Ị ga see nnụnụ abụọ na otu nkume. Gịnị guzo maka price bụ wuru na-ghaat okwu.
Oké ezi uche ọnụ.
Ọ skips a ntakịrị mgbe ọ na-abịa ọhụrụ ndekọ.
04 • Crosley CR704C-PA Abù Turntable
Ọrụ: CD Player, Kaseti Player
Ike Isi Iyi: nkwụnye Electric Powered
Na-agụnye: / b> AC Power nkwụnye, User Manual
x 17 sentimita W
Arọ: 17 pound
Sitere Kentucky USA, Crosley bụ a ọma ike ika maka audiophiles-achọ ịzụta ihe ntinye larịị turntable. Ọ bụrụ na ị na na na a mmefu ego ma ga-achọ ka a nlereanya nke ezi mma, nke a nlereanya bụ otu n'ime ntakịrị ọnụ Devid agụghị ndị gbara turntable na ahịa. Ọ bụ ezie na nke a nlereanya pụrụ n'ezie Devid agụghị ndị gbara, na nkà na ụzụ bụ bụghị.
Na $ 104,99, ị ga-enwe ike inwe aka gị na nke a nlereanya. Nke a bụ a belt chụpụrụ turntable na-arụ 3 gbapụrụ ọsọ (33 1/3, 45, 78 RPM). Ọ bụkwa a CD player nke nwere a programmable 20-track ebe nchekwa na-abịa tinyere n'akụkụ-n'ịnyịnya cassette oche. Nanị ikwunye na gị ama ma ọ bụ MP3 player dị ka ọ bụ obere audio njikere. Ọ bụ AM / FM redio na-abịa na ụgbọelu n'iji ya gee ntị Ịkpọ oku dị ka nke ọma. Iji elu ma ọ bụrụ na anya, o nwere ike na nso stereo okwu.
The imewe bụ ịtụnanya na na-ntekwasa na aja aja. The naanị downside nke nlereanya a bụ na ọ dịghị nwere a headphone jaak. Otú ọ dị, ọ bụ ndị ọzọ na atụmatụ na ụda àgwà na-eme ka ya maka ya. N'ozuzu, nke a bụ a kediegwu turntable na ọ bụrụ na ọ bụ n'ime gị ego, adịghị eche echiche ugboro abụọ.
05 • Vicrola nostalgic Aviator Wood 7-in-1 Bluetooth Turntable Entertainment Center, mahogani
Ọrụ: Wuru na-Na okwu, CD Player, CD edekọ, AM / FM Radio
Mmepụta Type: Ọkà Okwu, 3.5mm Jack
Na-agụnye: Remote Control, AC Power nkwụnye
x 21 sentimita W
Arọ: 25,2 pound
Ọnụ na $ 154,99, nke a bụ ọzọ dị ukwuu nlereanya site Innovative Technology. Ọ na-adịghị nnọọ nwere nnukwu ịnye ọnụahịa ma ọ bụ na-ihe dị ịtụnanya nlereanya. Ọ bụ imewe-enye a n'ezie dị mma authentic ochie vibe na na-ntekwasa na aja aja. Ọ bụrụ na ị na-na na n'ime Devid agụghị ndị gbara, nke a wee jide gị ntị.
Nke a bụ a atọ ọsọ turntable (33 1/3, 45, 78 RPM) na-arụ niile nke ọkacha mmasị gị vinyl ndekọ na albums. Best akụkụ, ya ezigbo osisi ewu bụ dara oké ọnụ. Ọ wuru na-Bluetooth ikuku egwu music gị Bluetooth nyeere ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla udọ mkpa. Ọzọkwa, ọ na-adị mfe dere niile nke ọkacha mmasị gị music si vinyls na cassettes directy ka a CD; dịghị kọmputa mkpa.
Nke a bụ ihe nile ahazi turntable dị ka ọ na-nwere a wuru na-CD player, kaseti na AM / FM redio ochie gaferela rotary tuner na-agụnye n'ụzọ zuru ezu ọtọ ime akara na ghaat okwu; ịtụnanya ọ bụghị ya? A USB a gụnyere maka aux input maka ihe ọ bụla na-abụghị ngwaọrụ Bluetooth na ii nwere RCA aux-na headphone jaak nakwa. Ná mmechi, a ga-e dere na gị shortlist maka ya ịja mma nyochaa.
Bluetooth ejikọ n'ezie ngwa ngwa.
Packaging bụ ọkaibe.
Great kọmpat usoro na a nostalgic anya.
CD ọrụ kwesịrị ka a mma.
06 • Grace Digital GDI-TW3USB 7-in-1 baraaka Entertainment Center, paprika
Nkọwa Environmental atụmatụ Ndị ọzọ na-:
CD na Music Player: Ee
CD ndekọ: Ee
Ghaat Channels: 2.0
Energy Star Ruru Eru: No
Recycled Packaging: Ee
Country nke Si Malite: China
RoHS Dabara: No
Ụdị Packaging: Retail Box
Akwụkwọ ikike: 90 ụbọchị, Retail ngwugwu akụkụ: Height: 24 ", Length: 17", Width: 16 ", Weight: 27 lbs,
Grace Digital bụ audio ụlọ ọrụ ahụ na-dabere na San Diego, USA. A ọma ike audio ụlọ ọrụ ma na-akwanyere ùgwù. Ọ bụrụ na ị na-eche otú ihe ndị price nke nlereanya a bụ, nke a Devid agụghị ndị gbara ndekọ player na-ọnụ na $ 143,73.
Nke a bụ a ochie turntable na-abịa na a ndekọ player, kaseti, CD player na AM / FM stereo; nri gị niile audio mkpa. Banyere ya ọsọ, ọ na-ekere 33, 45 na 78 RPM ndekọ na o nwere akpaka ụda na ogwe aka. Gịnị bụ n'ezie ịtụnanya bụ na ya nwere ihe abụọ na-nso na-ekwu okwu na-anapụta enwekwa stereo ụda na wuru na headphone jaak maka ndị na prefers onwe ntị. An RCA akara mmepụta bụ dị ka otu nhọrọ dị ka mma. Ịdekọ gị PC ma ọ bụ Mac dị mfe dị ka nke ọma iji wuru na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na Audacity Sound Editer software na a gụnyere.
Banyere ya imewe, ọ bụ a paprika osisi style kabinet inye ihe ochie Devid agụghị ndị gbara obi na-adị. Ọ bụrụ na ị na-ajụ onwe gị ma ọ bụrụ na ị ga-nlereanya a, ị kwesịrị ị na-ajụ ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ya mere onye ọrụ-enyi na enyi, ọ bụ ịrịba! Ọ na-agbakwa diski pụtara ngwa ngwa dị ka nke ọma. N'ozuzu, nlereanya a bụ ọkaibe na ya kwesịrị ịbụ akụkụ nke gị chọrọ ndepụta.
Ọrụ enyi na enyi omume na Burns a diski pụtara ngwa ngwa.
Skips a ntakịrị mgbe ọ na-abịa ọhụrụ vinyl.
07 • Pyle PTCD54UB Bluetooth Vintage Omuma Style Turntable Ọkà Okwu System
Arọ: 22 lbs
Unit Akụkụ: 20,08 "x 13,39" x 8,86 "
Agba: aja aja osisi (Maple ịkụ)
Ihe ịtụnanya nlereanya site Pyle, nke a bụ a kpochapụwo ịke turntable na nke ahụ bụ 6 na-na-1. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ọ bụla fancy, ọ dị oké vasatail na ọ na-eme ọrụ. Ọ bụ Devid agụghị ndị gbara turntable nke ga-enye gị a oge a na-ege ntị ahụmahụ.
Ọ nwere ihe dị ịtụnanya a technology na-abịa na-ewu na-Bluetooth maka Ikuku Music gụgharia. Best akụkụ, ọ na-arụ ọrụ na niile nke gị onwe onye Bluetooth ngwaọrụ dị ka iPhones, Android, Smartphones, iPad, Mbadamba, wdg Nke a nlereanya nwere a wuru na-CD player, oghere na-na cassette oche, na nso stereo ọkà okwu na AM / FM radio na Ịkpọ oku ngosi enwetaghị gị ntị. N'ihi Vinyl ka MP3 E, i nwere ike atụgharị gị ndia n'ime digital ọdịyo faịlụ na a headphone jaak ọsọ ọsọ. N'ihi na MP3 playback, e nwere bụ a USB Flash Draịvụ Reader. Adaba ọ bụghị ya?
N'ihi na ọ na imewe, na o nwere a osisi kabinet na ọ na-enye a ezigbo nostalgic mmetụta. Ntekwasa na aja aja na-a nta aka nke gold, nlereanya a na-aghaghị anya ọma n'ụlọ gị. Ya sere na ya osisi ikpe bụ nke abụọ ọ bụla. Best akụkụ? Ọ bụ price. Nlereanya a na-ọnụ na $ 129,99.
aja aja osisi (Maple ịkụ)
The ike download si vinyl ndekọ kọmputa na-emepụta CD.
Ike jikọọ smartphones.
Bluetooth usoro kwesịrị na-akakwa mma.
Atụmatụ: Wuru na-Na okwu, Line-na Jack, AM / FM Radio, CD edekọ
Mbanye Type: echebe mbanye
Obosara: 15,0 na
Elu: 11.5 na
Omimi: 11,0 na
Nlereanya a site Sylvania bụ n'ezie pụrụ iche tụnyere ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ a turntable na na ọnụ ala ma nwere ọtụtụ ọrụ, nke a bụ turntable gị.
Nlereanya a site Sylvania bụ a 5-in-1 turntable na elu àgwà ọkà okwu enwetaghị gị ntị. Ọnụ na naanị $ 64,62, ị ga-enwe ike igwu egwu niile ọkacha mmasị gị na ndekọ, CD, teepu cassettes na n'ikuku redio. Ọ na-nwere ihe aux-input jikọọ ọ bụla ọdịyo na ngwaọrụ. Ọ nwere ihe mara nostalgic osisi imecha nke bụ na-atọ na ihe oversized classic Ịkpọ oku bụ n'ezie sleek.
Ọ bụ ezie na ọ skips a ntakịrị mgbe ọ na-abịa ọhụrụ vinyls, ọ na-arụ ọrụ na-eju na ya nwere oké price. Ọ na-ese pụrụ iche na n'ezie pụrụ iche na-acha odo odo mkpuchi. Nke a ga-adị gị ma ọ bụrụ na Wishlist gị ego bụ n'okpuru $ 100.
Na-arụ ọrụ na-eju.
Skips a ntakịrị mgbe ọ na-abịa ọhụrụ vinyls.
09 • Pyle Vintage Vinyl Turntable baraaka System (PTCD64UBT)
Akụkụ: 19,4 x 13.2 x 9.2 sentimita
Akwụkwọ ikike: 1 afọ Manufacturer
Ọzọ nlereanya site Pyle, nke a bụ a turntable stereo usoro nke ahụ bụ Bluetooth dakọtara na CD, USB, SD Kaadị Player na USB edekọ niile maka price nke $ 149,99. Ọ bụrụ na ị nwere ego, ị ga-enweta ihe nlereanya a na a obi otiti.
Acha na aja aja, a kpochapụwo ịke turntable nwere oké nkà na ụzụ na-arụ ọrụ niile gị onwe onye ngwaọrụ Bluetooth. Vinyl ka MP3 ndekọ pụkwara mere. Ọ na-abịa na nso stereo ọkà okwu ise gị ntị ma AM / FM redio na Ịkpọ oku ngosi. An aux input nwekwara ike hụrụ na n'azụ panel. Gịnị bụ n'ezie ịtụnanya banyere ihe nlereanya a bụ na ọ bụ ọrụ Bluetooth ka ya ejikọ n'ezie ọma.
Nlereanya a na-agwakọta a classic ebre style na nkà na ụzụ nile na otu. Ọ bụ osisi kabinet finishing bụ ahụkebe na nwere ịtụnanya sere na ya. Adabara ma ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ, e nwere bụghị a mere na-na-nlereanya a ma ọ bụrụ na i nwere ego. N'ozuzu, nlereanya a ọ bụghị ihe ọjọọ ma e wezụga n'ihi na ọ na-price.
Ọ nwere a mara mma anya.
Bluetooth ejikọ n'ezie ọma.
Best Portable akpa akwa Turntables 2017-Bu ...
"Ekike onwe gị na bụ nke kasị mkpa, dị ka ị na-ahọrọ a onye na mpụ."
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịzụta turntables ma ọ bụ ochie na ngwaahịa, ọ bụghị uche isi reviews na turntable.com. Ọ na-enyere a ukwuu.
Ọhụrụ na-ewu ewu blog
Copyright © 2017 · www.10turntables.com, Ikike niile echekwabara. Ike Site SinoArt